१६ बर्षे राउटे सुन्दरीको ३२ बर्षका युवासँग बिहे, राउटेहरुले य’सरी मनाउछन् सु’हागरात, थाहा पाउदा सबै च’कित ! (भिडियो) – AB Sansar
October 13, 2020 adminLeaveaComment on १६ बर्षे राउटे सुन्दरीको ३२ बर्षका युवासँग बिहे, राउटेहरुले य’सरी मनाउछन् सु’हागरात, थाहा पाउदा सबै च’कित ! (भिडियो)
काठमाडौं । सहरका युवायुवतीहरू विभिन्न पार्क तथा मन्दिरहरूमा भेट नै गफगाफमा समय बिताउँछन्, तर जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे युवायुवती कसरी रमाइलो गर्छन् होला ? यो जिज्ञासा मेट्न दुई वर्षसम्म विभिन्न समयमा फिरन्ते राउटेसँग साक्षात्कार गर्ने क्रममा केही रमाइला प्रेम प्रसंग अगाडि आए । अन्य समुदायमा जस्तै राउटे युवायुवतीहरू पनि आपसमा भेटघाट र रमाइलो गर्छन्। *****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’****,
जंगलतिर एक्लै काठ काट्न र सिकार खेल्न जान्छौं’ राउटे युवती मैना शाहीले लजाउँदै भनिन्— ‘केही दिन रमाइलो गर भनेर सबैले छोडिदिन्छन्। परिवार र मुखियाले पनि केही काम लगाउँदैनन्।’ केटाकेटीले आपसमा मन पराएपछि बुहारी माग्न जाने, विवाहको मिति तय गर्ने र सानोतिनो भोज गरेर विवाह गर्ने चलन छ। भोजका रूपमा उनीहरू भात, मासु र जाँड बनाउँछन्। हेर्नुहोस पुरा भिडियो :
हार्दिक बधाई ! गायिका शान्ती श्री परियारलाई पुत्री लाभ….